Ny "antenatenan'ilay" - A Self-mampifandanja ny Scooter hitondra anareo ho azy - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Izany Koowheel Electric tena mahay mampifandanja scooter F1 dia mazava fa mavitrika, patanty zava-baovao mahafinaritra lamaody famolavolana, LED miseho lamba mampiseho tanteraka ny bateria sy ny hafainganam-pandeha, Super taitra hisakana ny fiasan'ireny amin'ny 8inch fingotra pneumatic kodiarana. Ankoatra izany, ka ento mora mivalona. Na izany aza, dia mety mitovy manome ny angovo sy ny filaminana toy ny misy ny ambony-lamaody farany. Extendable tahony, tsara ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe.
Ary koa, iray hafa tsara indrindra skateboard herinaratra no tena nahatonga amin'ny saram ilaina mba mety mihazakazaka mafy bodofotsy fisarahana intsony ary tsy maintsy ho mendrika ny nitaingina ny tehezan-tendrombohitra ihany koa. Ny hafainganam-pandeha izy ireo mandeha amin'ny miovaova, na izany aza dia mety ho tonga ny hafainganam-pandeha 42 km Max isan'ora.
Raha toa ka mila mividy ny herinaratra scooter ho an'ny mpanjifa tsirairay, izany E1 mety ho tena ara-toekarena sy manampy traikefa ho anao sy ny olona ao amin'ny olon-tiany. Na be dia be ianao mandoa, fa efa inoana hihaona ny karazana afo loza lurks (na tsy Miafina) ao misy scooter. Noho izany, ambany be ny orana, fa manan-tsaina fotsiny ny fandehandehanana, ka tandremo lavitra puddles. Na izany aza raha oharina amin'ny Nampiroborobo birao, ny E1 manana tenifototra tena mahafinaritra fa manan-danja ny zavatra - na inona na inona fanampiny, na inona na inona loatra. Bisikileta dia ampiasaina ho an'ny fialam-boly fotsiny fa tsy tanjona na izany aza noho ny commuting - miasa, any amin'ny toeram Retailer, inona no ve ianao. I misintona ny, ary manana mahatahotra saika-masoandro mody mikorisa. Ny voalohany indrindra nihazakazaka amin'ny dian'ny 16mph, ny farany kosa dia afaka hiakatra any 22kmh. Mety manana foto-kevitra momba ny dian'ny fari-ny kely Harley.